Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Fahazoan-dalana hitoraka blaogy! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Septambra 2010 7:27 GMT 1	 · Mpanoratra Haifa Alrasheed Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Teknolojia
Nahatonga resabe tamin'ny vohikala sy blaogin'ny media sosialy ny fanambarana farany  nataon'ny mpitondra-tenin'ny Minisitry ny kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao  Abdulrahman Al Hazzaa. Nilaza izany fanambaràna izany fa ireo mpamoaka ao amin'ny vohikala sy media ao amin'ny aterineton'ny Arabia Saodita rehetra, anisan'izany ireo blaogy sy sehatra fifanakalozan-kevitra, dia mila voarakitra ofisialy ao anatin'ny lisitry ny Governemanta. Samy manohitra izany lalàna vaovao izany na ireo Saodiana na ireo tsy Saodiana. Ao amin'ny Twitter, mivezivezy amin'ny tenifototra #haza3 io fanoherana io – izay mitovy amin'ny fanampin'anarana ofisialin'ilay minisitra.
Ao amin'ny blaoginy Crossroads Arabia , faritan'i John Burgess ho fanarahamaso ity fanapaha-kevitra ity:
Honena ny blaoginy i iamsoos  ao amin'ny Twitter-ny:
Ireo hafa indray kosa dia nanapa-kevitra ny hanesoeso amin'ity raharaha ity. Miteny i kabdu :
ary dia nanampy i Fouad Alfarhan :
i Abdulaziz Fagih  kosa dia nanolotra hevitra ho fanamborana lalàna vaovao:
Nampisafoaka mpitoraka blaogy maro ihany koa ity fanambarana ity. Ao amin'ny blaoginy, manontany ny fahalalahan'ny vahoaka Saodiana miteny i Saudi Women  (Ireo vehivavy Saodiana):
Toy izany koa, i Sultan Aljumairy  dia maneho ny fahasahiranan-tsainy ao anatina lahatsoratra am-blaogy feno fahatezerana :
Vokatr”ireo resabe makadiry, nandà i Al-Hazzaa denied  ny andro ampitson'io fa tsy mila endrika taratasy fisoratana avy amin'ireo mpitoraka blaogy na ireo mpitantana sehatra fiadian-kevitra. Nanampy ihany koa izy fa ny fampiharana ity lalàna ity dia natokana ho an'ireo gazety amin'ny aterineto. Nanambara ny Minisitera fa  diso ny fandraisana ny zavatra voatenin'ilay mpitondra tenin'i Al Hazzaa.
Manondro ny Twitter ho fitaovana mahery ankehitriny i Fawaz Saad :
Miteny i Samar Almoossa :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/28/9434/
 fanambarana farany: http://themedianote.com//newsdetail.aspx?id=1332
 Minisitry ny kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao: http://www.info.gov.sa/English/eDefault.aspx
 nandà i Al-Hazzaa denied: http://themedianote.com/newsdetail.aspx?id=1342
 Nanambara ny Minisitera fa: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gllbHGSiriR8CVwW7PGlIGZvu7IA